Anụ ọhịa ọzara Sahara | Njem akụkọ
Ọzara Sahara bụ otu n'ime ọzara kachasị ama n'ụwa, nke nwere ụbọchị ọkụ na abalị dị jụụ. Ọ dị ka ọ nweghị ihe ma ọ bụ na ọ nweghị onye nwere ike ibi na ya, ma, agbanyeghị, Sahara nwere ọtụtụ ndụ.
N'ime ogbunigwe ya, ebe mmadụ nwere ike iche n'echiche na ọ dịghị mmiri mmiri nke na-akwado ndụ, n'eziokwu, ihe dị iche na-eme: Sahara na-ejupụta na ndụ! Ụmụ anụmanụ ya bụ ụfọdụ n'ime ụdị ndị kasị ochie na mbara ala ma nwee ike ime mgbanwe n'ọnọdụ ibi ndụ na-adịghị mfe ma ọlị. ka anyị hụ taa ụmụ anụmanụ nke Sahara.
2 dromedary camel
4 ogwugwu ebe
5 agwo mpi
6 nyochaa ngwere
7 egbu egbu akpị
8 Ostrich ọzara
9 nkịta ọhịa africa
11 fennel nkịta ọhịa
15 ọzara hedgehog
16 mongoose dị gịrịgịrị
17 agụọ tụrụ atụ
Ọ bụ ụdị Antelope dị larịị, ụkwụ na-enye ha ohere ịgafe n'ájá. Ma ọ bụ ihe ihere na ọ bụ n'ihe ize ndụ nke ikpochapụ ebe ọ bụ na ha na-achọ anụ ha na akpụkpọ ahụ ha, na mgbakwunye na ebe obibi ha na-akawanye njọ n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ na omume mmadụ.
Taa ụmụ anụmanụ ndị a dị obere karịa ka ọ dị n'oge gara aga na n'ihi ụkwụ ha, ọ na-esiri ha ike ịgbanahụ anụ ọhịa ha.
Kamel na ọzara na-aga otu aka na dromedary, ndị camel-abua-aturu, bụ akwụkwọ ozi mara mma nke Sahara. Ọ bụ ebe a ka anụ ọhịa na-echekwa abụba, ọ bụghị mmiri. Kamel ahụ nwere ike ị drinkụ 100 lita mmiri n'ime nkeji iri!
Ọ bụkwa anụmanụ dị nro, otu n'ime nnukwu ụlọ nke ọzara, a na-ejikwa ya nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ siri ike ma nwee ike ịga ọtụtụ kilomita na-enweghị mmiri ma ọ bụ nri. Enyi nwoke kachasi n'uwa kedu ka i mere!
Ọ bụ ụdị kachasị nke gazelles niile: Ọ bụ 65 centimita n'ogologo na 50 pound. Aha ọzọ ọ na-anata bụ "Ariel gazelle". Ndị a bụ anụmanụ anaghị eri anụ na-eri akwụkwọ sitere na ohia na osisi.
Ị hụla ka ha na-amali elu mgbe ha hụrụ ndị na-eri ha? Ha bụ ndị ahụ na, dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ha na-eme ya iji gosi na ha nọ n'ọnọdụ dị mma nakwa na ha ga-eme ka ọ ghara imebi ndụ ha. Ha nwere obi ike ee, ma ọbụna otú ọ bụ nnọọ ngwangwa umu.
Nke ahụ ọ bụ obere ebe oji nke na-agbapụta nke ukwuu na nke ahụ na-eri nri na ihe ọ bụla anụmanụ ndị ọzọ hapụrụ. A na-agụ ụdị atọ, nke na-eme bọọlụ poop, onye na-egwu olulu na onye dị umengwụ nke na-ebi naanị n'ụgbụgbọ.
Omenala eschatological a, nke ịme bọọlụ nke poop, na-amasị ndị nwoke nke ụdị. Ụmụ nwanyị na-abanye n'ime olulu mmiri na-anọ n'ime.
A makwaara ha dị ka agwọ aja na ike na-eto ruo 50 centimeters ogologo. Naanị ị na-ahụ ha n'abalị na n'ozuzu n'ehihie, ha na-eli onwe ha n'ájá. Ndi agwọ nsi nke nwere ike imebi akpụkpọ ahụ dị ukwuu, mebie sel ma mepụta ọtụtụ nsị.
Agwọ mpi taa bu a ụdị dị ize ndụ tumadi n'ihi mmebi nke gburugburu ebe obibi ha. Ọ dịghị onye maara nke ọma ihe mere ha ji nwee mpi n'anya ha, ọ bụ ezie na a na-eche na ọ bụ iji chebe ha pụọ ​​​​na ájá ma ọ bụ iji banye na ya ma ọ bụ iji kpuchie ya ...
ọ bu ihe nākpu akpu ibu nsi, oyi na-acha ọbara ọbara, ya mere okpomọkụ ikuku nwere mmetụta dị ukwuu na omume ha. Ha na-ebi na hives na-ekpo ọkụ ma mgbe oyi na-atụ, ọ dịghị ebe a na-ahụ ha. Ọ bụ ya mere ngwere na-enweghị usoro ọgụ, yabụ mgbe oyi na-atụ, ha na-echebe onwe ha nke ukwuu, ọ na-aghọkwa ihe ike.
Gịnị ka ngwere na-eri? Ha na-eri obere anụmanụ dị ka oke, mammals ma ọ bụ ụmụ ahụhụ. Ihe niile ha nwere ike ịhụ.
egbu egbu akpị
Ọ bụ ahụhụ na-egbu egbu ma ha na-eji ngwa agha ha n'ụzọ abụọ: na ogologo pincer ha na-emerụ ndị na-emegide ha na obere pincer ha na ndị na-esighị ike, nke karịsịa nke nwere isi ojii, bụ nke ha na-etinye nsi.
Nsi a nwere neurotoxins ma na-emepụta ihe mgbu. Ụmụaka na ndị agadi na-enwekarị nsogbu, yabụ jiri nlezianya zọọ ụkwụ. Ihe kacha njọ bụ na e nwere ndị na-azụ ha ma na-ere ha ka anụ ụlọ.
Nnụnụ na-anaghị efe efe, ogbenye. Ọ bụ otú ahụ ka ha na-eche banyere ya mgbe nile, ma n'eziokwu ya enweghị ike ịgba ọsọ na-eme ya nke ọma site n'ịbụ otu n'ime anụmanụ kacha ọsọ n'ụwa. Ostrich nwere ike ịgba ọsọ kilomita 40 kwa elekere, n'agbanyeghị na ha buru ibu.
E nwere ụdị nnụnụ dị iche iche na ọzara Sahara, ha na-etinye nnukwu akwa akwa na ogologo ụkwụ ya nwere mkpịsị ụkwụ abụọ, nke dị mma maka ịga ije ogologo. Ụkwụ ndị a dịkwa oke ike, ha nwere ike ịkụ super kicks, na nke a na-agbakwunyere na ha nwere ọmarịcha anya na anụ ahụ pụrụ iche.
Nnụnụ nnụnụ ọzara anaghị aga ebe dị anya site na isi mmiri ma ọ bụrụ na i jiri nlezianya lelee ha, lezie anya, enwere anụ ndị dị nso. Gịnị ka ha na-eri? Osisi, ahịhịa, mgbe ụfọdụ ụmụ anụmanụ.
nkịta ọhịa africa
Ha bụ nkịta ọhịa nwere ume nke ukwuu ma na-anọgidesi ike ma a bịa n'ịchụ anụ ha, nke, n'ikpeazụ, mgbe ha ruru ya, ha na-agbapụ ya. Nkịta bi na savannas dị na ndịda na etiti ọzara, na otu ìgwè ehi
Echere na nke ahụ Ọnụọgụ ihe ịga nke ọma ha mgbe ha malitere ịchụ nta karịrị 80%, 90% na Serengeti, mgbe ihe ịga nke ọma nke ọdụm bụ 30%. Ha na-eme nke ọma! Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, mgbe ha gbusịrị anụ ahụ, ha na-ahapụ nkịta ochie na ụmụ nkịta ka ha buru ụzọ rie nri.
Animalsmụ anụmanụ ndị a Ha nọ n'iyi, ihe dị ka anụmanụ 250 ka dị na etiti na ọdịda anyanwụ Sahara nakwa na savanna nke Sudan. N'adịghị ka cheetah ndị ọzọ ụdị a dị obere, nwere agba uwe ole na ole ma dị mkpụmkpụ.
Ndị cheetah nke ọzara Sahara ha na-achụ nta nke ọma n'abalị na nke ahụ bụ ihe sitere na oke okpomọkụ nke gburugburu ya. Ha nwekwara ike ịdị ndụ ogologo oge karịa ụmụ nwanne nne ha na-enweghị mmiri, ebe ọ bụ na ha na-aṅụ ọbara nke anụ oriri ha.
fennel nkịta ọhịa
Fanak pụtara fox na Arabic ya mere aha obere nkịta ọhịa a dị ntakịrị. The Fox ọ pere mpe, otu n'ime obere canines n'ime ezinụlọ mejupụtara anụ ọhịa wolf, nkịta ọhịa na nkịta. Ọ nwere ajị anụ dị ọkụ nke ukwuu nke na-enyere aka igosipụta ìhè anyanwụ.
nkịta ọhịa a nwere akụrụ ime ọzara, yabụ na ha na-ebelata mfu mmiri n'ahụ gị. Nwee a nnukwu mmetụta na ịnụ ihe dị mma. Ọ bụ ya mere ha ji agbaso anụ oriri ha site n'ige ntị, n'ụzọ bụ isi. Ha nwekwara ike ịrị osisi na-achọ obere nnụnụ na akwa.
Ọ bụ òké emegharịala nke ọma ibi n'ime ọzara tara akpụ. Nwere ike ima elu na-agba ọsọ na nnukwu ọsọ, ya mere ọ na-anọgide na-adị ndụ ma gbanarị ndị na-eri anụ ya. Ihe oriri ha na-agụnye ụmụ ahụhụ, osisi na mkpụrụ, nke na-esikwa na ya nweta mmiri mmiri.
Ọ bụ ụdị dị iche iche nke Africa nke a na-ahụkwa na mpaghara ugwu nke Sahara. Ọ nwere agba ntụ ntụ dịtụ n'ebe dị anya, mana n'akụkụ ya na-enwe ọtụtụ agba.
Ndị ikom toro ibu karịa ụmụ nwanyị ma na-adị ndụ n'ime ọzara site n'iri ntakịrị ihe niile, osisi na ụmụ anụmanụ.
Ọ bụ ụdị nke ezinụlọ bustard. Ọ bụ nnụnụ na na-eri nri ọkachamma na ụmụ ahụhụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị nke ukwuu, ị nwere ike iri mkpụrụ. Ọnwụ nke ebe obibi pụtara na ndị otu ụdị a dị ole na ole, yabụ enwere ike were ya dị ka ihe egwu.
Ọ bụ obere oke ọhịa na-akpọnwụ mgbe ọ na-eche na ọ na-eyi egwu wee na-akpụ akpụ, n'ihi ya, ọ na-esi ike ijide ya ebe ọ bụ na ọ na-akụ ebe niile. Nke ahụ na-eri? Ụmụ ahụhụ, akwa na osisi.
mongoose dị gịrịgịrị
Ọ bụ mongoose ọdụ ojii. Ọ na-eri ụmụ ahụhụ, ọ bụ ezie na ọ na-erikwa ngwere, òké, nnụnụ na agwọ. Ọzọkwa nwere ike igbu ma rie agwọ ọjọọ, mana naanị ma ọ bụrụ na ọ dị gị egwu n'ezie.
Mongoose a nwere ike ịrị osisi dị mma karịa mongoose nkịtị, ya mere ọ na-eri ọtụtụ nnụnụ.
agụọ tụrụ atụ
Ọ bụ "hyena na-amụmụ ọnụ ọchị". Ọ kabeghị njedebe nke ikpochapụ, ma ọ bụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ ya na-ebelata ka oge na-aga na mfu nke gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ụdị hyena ndị ọzọ, ntụpọ ya na-apụta, ọ bụ ezie na mgbe hyena ga-aka agba agba ya na-agbanwe.
Anụ ọhịa ahụ ahụrụ anya na-achụ anụ nke ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Anụ ọhịa Sahara